Rayad ku dhintey Duqeyn loogu geystey Magaalada Muqdisho.[Akhris …] – Radio Daljir
Muqdisho, June, 28- Maanta ayaa waxaa dagaal xooggani uu ka dhacay magaalada Caasimadda ah ee Muqdisho , dagaalkan oo u dhaxeeyey Ciidamada dawladda oo ay garab galayeen kuwo nabad ilaalinta u jooga magaalada Muqdisho.
Ugu yaraan 6 Qof ayaa ku dhintey inta la ogyahay dagaalkii dhacay maanta, waxaana dhaawac uu ka soo gaarey tiro dad ah oo dhan Labaatammeeyo sida ay sheegeen Laamahha Caafimaadka.
Waxaa sidoo kale lala eegtey Madaafiicda loo yaqaan Hoobiyaha bar ay degganaayeen Ciidamada nabad ilaalinta ee AMISOM, waxaana sida ay sheegeen dad goob joogayaal ahi ay iyaguna ay kaga warceliyeen madaafiic kale oo aan la garaneyn khasaarahha dhabta ah ee ay kallifeen.
Duqeymahaa ayaa dhacay kaddib markii ciidamada AMISOM ee ku sugan waddada KM 4 iyo garoonka Caalamiga ah lagu ekeeyey weerarro hoobiyayaal ah, iyaga oo markiiba jawaab ka bixiyey ayaa waxaa Madaafiicdii ay gammeen ay ku dhaceen Isgoyska iyo Suuqa weyn ee Bakaaraha.
Afar qof oo iyaga ku dhintey weerarkaan isku meel ayaa waxaa ka mid ahaa wiil aad u da?yar waxaana dadkii dhaawaca uu ka soo gaarey duqeymahani la geeyey goobo Caafimaad waxaana la sheegey in ay isugu jiraan dhaawacyo cul culus iyo kuwo fud fudba.
Dhacdadan ayaa waxaa ay ku soo beegmeysaa iyada oo manta uu shir jara?id uu ku qabtey Magaalada Muqdisho Shariif Sh Axmed Madaxweynaha KMG ee Soomaaliya kaas oo shirkiisii jaraa?id ku sheegey in ciidamada AMISOM aysan wax dhibaato ah aysan u geysaneyn dadka rayadka ah.